अब त लाज छोप ! : RajdhaniDaily.com sharethis
अब त लाज छोप !
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म निरन्तर जारी राख्ने भनिएको नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलनले न्याय क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आपूm संवैधानिक प्रक्रियामार्फत आएकाले सडकको आन्दोलनको भरमा नहट्ने अडान राख्दै आइरहेका छन् । उनले आपूmलाई संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै हटाउन चुनौतीसमेत दिँदै आएका छन् । यसले गर्दा न्याय क्षेत्र थप अन्योल र आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।
न्यायालय र न्याय क्षेत्र यतिखेर आफंैमा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । यसै विषयलाई लिएर लामो समय आन्दोलन हुने, नैतिकता र जनविश्वासका कुरा उठ्ने तथा संवैधानिक उपचारको हकबाट सर्वसाधारण जनता पनि वञ्चित हुने भएपछि सर्वोच्चको छवि धुमिल हुन पुगेको छ । न्यायसम्पादन आफैंमा अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । न्याय सम्पादन गर्ने निर्णायक थलोमा रहेका अभिभावकहरू कर्तव्यच्युत हुन पुग्दा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नै विवादमा मुछिएपछि यही तालुक निकायमा उठेको प्रश्नको उचित जवाफ दिने समय नआउँदासम्म न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसामा सर्वसाधारणको तहसम्म पुनः ऊर्जा भरिएला भन्ने अवस्था नै छैन । यसले देशवासी सबैलाई लज्जाबोध गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका ‘ग्रेसफुल एक्जिट’का आफ्नै सर्तहरू छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका वकिल, नागरिक समाज र कानुनविद्हरूका आफ्नै तर्क र सुझाव छन् । न्याय भनेको मुक्ति हो । न्यायाधीश भनेको समस्या वा अन्यायबाट छुटकारा दिने मुक्ति दाता हो । तर, अन्याय भएमा त्यो आफंैमा ‘उन्मुक्ति’ हो । न्यायदाताहरूले जेसुकै गरे पनि उन्मुक्ति पाउलान् भन्न त सकिँदैन तर यो उनीहरू आफंैले नैतिकता र जनविश्वासमा टेकेर आफैंले फैसला लिनुपर्ने कुरा हो । अरूको फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो नैतिक धरातलको आधारमा पनि स्व फैसला अवश्यै गर्न सक्छन् । न्यायालयमा उठेका कुरा बढी नैतिकता र जिम्मेवारी बोधका कुरा हुन्छन् । ती कानुनी र रोजगारीका कुरासँग कमै सम्बन्धित हुन्छन् । लडाइँ लडिरहँदा मानिस आफैंमा ‘इगो’ र स्वत्वको लडाइँमा पुग्छ । यसले मानिसलाई जड र हठी बनाउँछ । यसपछिको अवस्थामा मानिस नांगैबुंगै भएर पनि लडाइँ लडिरहन्छ । यतिबेला समाजमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्नेभन्दा पनि एउटा नैतिक समस्या प्रबल बनेर आउँछ । त्यो हो, लाज । लड्ने मानिसलाई यसको प्रवाहन होला तर देख्नेलाई ठूलो लाज र सरमको विषय बनिसकेको हुन्छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ । फैसला हुने लाइनमा धेरै मुद्दा बाँकी छन् । कतिपय नयाँ मुद्दा आइरहेका पनि छन् । कतिपय त फैसला भएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । अदालतमा बेथितिका कुरा उठिरहेका छन् । बेल सपिङ, बेन्च सेटिङ, बिचौलियाको चलखेलका कुरा आइरहेका छन् । यी कम गम्भीर कुरा होइनन् । न्यायालय के साँच्चै न्यायालय नै बन्न सक्ला त भन्ने आममानिसमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । दैनिक कार्य सम्पादनका हिसाबले कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । तोकिएका इजलास समयमा नै बस्न सकिरहेको छैन । न्यायाधीश आफैं विद्रोही बनिरहेका छन् । यो घोर विडम्बना हो । सर्वोच्चमा जाने चिया खाने, आन्दोलन गर्ने र त्यसै फर्कने छुट न्यायाधीशलाई पनि छैन । त्यस्तो कार्य न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत कार्य हो ।
अब त जनताले भन्ने बेला पनि भयो ‘न्यायमा ढिलाइ’ भनेको आफंैमा अन्याय हो । यो अब लाजको विषय भइसक्यो । अब त लाज छोप ।
गणतान्त्रिक राजनीतिमा दलीय संस्कृतिको अभाव कानुनले होइन व्यवहारले बलात्कार नियन्त्रण गर्छ लिपुलेक सडक विस्तार रोक्न कूटनीतिक छलफल अघि बढाऊ
मधेश प्रदेश नाम राखेको भन्दै युवाहरुले गरे प्रदेशसभा सदस्यको पुतला दहन
कुन-कुन देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन निषेध छ ?
संक्रमण बढ्दा दलका गतिविधि ठप्प
रोल्पाको सुलिचौरमा सुनिलस्मृति साहित्य महोत्सव हुने
‘पुष्पा’ हिट भएपछि अभिनेत्री रश्मिकाले १ कराेड पारिश्रमिक बढाइन्
ट्रकको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
जीवन उपयोगी शिक्षाको मोडेल
युरोकपलाई फ्रान्स तयार रहेको संकेत